Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Kubhabhatidzwa Kunorevei? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bassa (Cameroon) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malay Malayalam Maya Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Tzotzil Ukrainian Valencian Vietnamese Welsh
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 1: Kubhabhatidzwa Kunorevei?
Gore negore, vechidiki vakawanda vanorerwa mumhuri dzeZvapupu zvaJehovha vanobhabhatidzwa. Uri kufunga nezvekutora danho iroro here? Kana zvakadaro, unofanira kutanga wanzwisisa kuti kuzvitsaurira uye kubhabhatidzwa zvinorevei.
Chii chinonzi kubhabhatidzwa?
Chii chinonzi kuzvitsaurira?
Nei kubhabhatidzwa kuchikosha?
Nhema uye chokwadi
Kubhabhatidzwa kunotaurwa muBhaibheri kunoreva kunyatsonyudzwa mumvura kwete kusaswa mvura uye kunomiririra chimwe chinhu chinokosha chaizvo.
Kunyudzwa mumvura paunobhabhatidzwa kunoratidza pachena kuti hauchararamiri kuita zvaunoda chete.
Kubudiswa mumvura kunoratidza kuti wava kurarama upenyu hutsva uchiita zvinofadza Mwari
Paunobhabhatidzwa unoratidza pachena kuti unobvuma kuti Jehovha ndiye ane kodzero yekutaura kuti zvakanaka uye zvakaipa ndezvipi, uye kuti wakamuvimbisa kuti ucharamba uchiita zvaanoda kuti uite.
Zvekufunga nezvazvo: Nei uchifanira kuva nechido chekuratidza pachena kuti uchararama uchiteerera Jehovha kweupenyu hwako hwese? Ona 1 Johani 4:19 uye Zvakazarurwa 4:11.
Usati wabhabhatidzwa, unofanira kuzvitsaurira kuna Jehovha. Unozviita sei?
Unonyengetera kuna Jehovha uchimuvimbisa kuti uchamushumira kweupenyu hwako hwese uye kuti uchaita zvaanoda pasinei nezvingaitika kana kuti zvingasarudza kuitwa nevamwe.
Paunozobhabhatidzwa unenge wava kuratidza pachena kuti wakazvitsaurira. Vamwe vanobva vaziva kuti wakasarudza kuti hauchazviraramiri uye wava waJehovha.—Mateu 16:24.
Zvekufunga nezvazvo: Nei upenyu hwako huchiita nani paunosarudza kuti wava waJehovha? Ona Isaya 48:17, 18 uye VaHebheru 11:6.
Jesu akati vadzidzi vake vaifanira kubhabhatidzwa. (Mateu 28:19, 20) Saka, vaKristu vachiri kufanirawo kubhabhatidzwa. Bhaibheri rinototi munhu anofanira kubhabhatidzwa kuti aponeswe.—1 Petro 3:21.
Asi unofanira kubhabhatidzwa nekuti unoda Jehovha uye unokoshesa ushamwari hwako naye. Unofanira kuva nemaonero akafanana neemunyori wepisarema uyo akati: “Ndicharipa Jehovha nechii nekuda kwezvinhu zvese zvakanaka zvaakandiitira? . . . Ndichadana zita raJehovha. Ndicharipa mhiko dzangu kuna Jehovha.”—Pisarema 116:12-14.
Zvekufunga nezvazvo: Ndezvipi zvinhu zvakanaka zvawakaitirwa naJehovha, uye ungamuripa sei? Ona Dheuteronomi 10:12, 13 uye VaRoma 12:1.
“Kuzvitsaurira ivimbiso yaunoita kuna Jehovha uye iyi haisi nyaya yekutamba nayo. Asi kuva mushumiri waJehovha akazvitsaurira kunoita kuti uwane makomborero akawanda. Iye anogona kutichengeta kupfuura kuzvichengeta kwatingaita isu pachedu.”—Mijin.
“Jehovha akatoratidza kuti anokuda. Paunobhabhatidzwa unoratidza kuti unomudawo chaizvo. Kubhabhatidzwa iropafadzo yakakura uye chikomborero chaicho!”—Ember.
“Kusarudza kuzvitsaurira kuna Mwari uye kubhabhatidzwa, ndicho chisarudzo chinokosha chaizvo chingaitwa nemunhu. Asi haufaniri kutya. Kana wagadzirira uye uchizviita nechinangwa chakanaka, ichi ndicho chisarudzo chakanaka kupfuura zvese zvaungaita.”—Julian.
NHEMA— Vanhu vakuru chete ndivo vanokwanisa kuita chisarudzo chekubhabhatidzwa.
CHOKWADI— Zera handiro rinoratidza kuti munhu ava kukwanisa kuita chisarudzo ichi, asi kuda uye kuteerera kwaanoita Jehovha. Kunyange zvazvo vakanga vachiri vadiki, Josefa, Samueri naJosiya vakasarudza kushumira Jehovha. Ndizvo zviri kuitwa nevechidiki vakawanda mazuva ano.
Bhaibheri rinoti: “Mwana anozivikanwa nemabasa ake, kuti tsika dzake dzakachena uye dzakarurama.”—Zvirevo 20:11.
NHEMA— Kana shamwari dzako dzichibhabhatidzwa, unofanira kubhabhatidzwawo.
CHOKWADI— Munhu anozvisarudzira ega zvichibva pamwoyo kuti anoda kuzvitsaurira here uye kubhabhatidzwa. Hazvingoitwi nekuti vamwe vezera rako vari kubhabhatidzwa kana kuti vamwe vava kufunga kuti wasvika pazera rekuti unofanira kubhabhatidzwa.
Bhaibheri rinoti: “Vanhu [vaMwari] vachazvipira nemwoyo wese.”—Pisarema 110:3.
NHEMA— Kana usina kubhabhatidzwa hauzozvidaviriri pane zvaunokanganisa.
CHOKWADI— Hautangi kuzvidavirira kuna Jehovha paunobhabhatidzwa, asi paunongotanga kuziva zvakanaka nezvakaipa.
Bhaibheri rinoti: “Kana munhu achiziva zvinhu zvakarurama asi orega kuzviita, anenge achiita chivi.”—Jakobho 4:17.
ZANO: Kana uchitya kuva muKristu akazvitsaurira uye akabhabhatidzwa, wadii kuongorora kuti nei uchitya woona zvaungaita kuti ukurire kutya ikoko? Unogona kuita izvozvo nekuverenga Chitsauko 37 chebhuku rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2.
Kudzokorora: Nei kubhabhatidzwa kuchikosha?
Jesu akarayira kuti vadzidzi vake vabhabhatidzwe.
Kuti munhu aponeswe anofanira kubhabhatidzwa.
Chikomborero chaicho kushumira Jehovha semuKristu akazvitsaurira uye akabhabhatidzwa.
Munhu anofanira kubhabhatidzwa sei uye riini? Kubhabhatidzwa kunogeza chivi here? Bhaibheri rinodzidzisa kuti vacheche vanofanira kubhabhatidzwa here?
Wagadzirira Kubhabhatidzwa Here?
Mhinduro dzako kumibvunzo iri munyaya ino dzichakubatsira kusarudza.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?—Chikamu 1: Kubhabhatidzwa Kunorevei?
ijwyp nyaya 109